Sidee loola macaamilaa sagaalka midab ee ugu adag mashiinka daabacaadda? - Shanghai Duxia Warshadaha iyo Ganacsiga
Daabacaadda ayaa caan ku ah noocyo kala duwan, waxaana jira arrimo badan oo u baahan fiiro gaar ah. Marka loo eego khibradda daabacaadda ee xirfadlayaasha warshadaha, halkan waxaa ku yaal sagaal midab oo adag oo daabacan iyo qaar ka mid ah tixgelinta naqshadaha pre-press.
1. Isku dheelitirka cirro Marka loo eego khibrada aragtida iyo wax soo saarka, waxa ugu adag ee lagu xakamayn karo midabka waxyaabaha la daabacay waa isku dheelitirnaan. Isku dheelitirnaanta Cagaarka macnaheedu waa in saddexda midab ee aasaasiga ah ee huruudda, magenta, iyo cyan la isku daro oo laga badbadiyo iftiinka ilaa mugdiga iyadoo loo eegayo saamiga dhibcaha qaarkood si loo helo achromatic achromatic (caddaan, cawl khafiif ah, cawl, cirro madow, madow) oo leh iftiin kala duwan hoosta daabacaad gaar ah. Helitaanka midab cawl oo muuqaal ahaan dhexdhexaad ah waxay leedahay arrimo badan oo saameeya. Qaddarka khad loo adeegsaday daabacaadda, waraaqda, cufnaanta bogga buuxa, aagga dhibcaha, daabacaadda iyo tirada khadadka shaashadda dhammaantood waxay ku yeelan doonaan saameyn aan la koobi karayn dheelitirka cirro. Waa tijaabada ugu badan ee saxnaanta dusha sare ee mashiinka iyo heerka xirfadeed ee wadaha.
2, shaashad 4-midab leh iyo midab 3-midab leh, ha ku daabicin midab buuxa (daabacaadda midabka barta ayaa lagula talinayaa).
3. Waxyaabaha ay naqshadeeyeen dadka aan fahmin daabacaadda ayaa ah kuwa ugu adag in la daabaco. Midabku waa hal dhinac, aad u tiro badan oo heer sare ah, jilayaal aad u yar-yar iyo wixii la mid ah.
4. Shaashad ballaaran oo fidsan oo leh C = 50, M = 50, Y = 50, K = 50, midabka midabku aad ayuu u xumaanayaa haddii ay wax yar khaldamaan.
5. Qoraalku waa midab afar midab ah, yacni, waxaa jira qoraal afarta midab leh ee cmyk, gaar ahaan jilayaasha aadka u yaryar, oo ay adag tahay in la xidho, ilkaha mashiinka qabanayaana aad bay u baahan yihiin. Tani sidoo kale waa dhibaato caadi ah, sidaa darteed naqshadeeyaha pre-press waa inuu hubiyaa in qoraalka madow ee ku jira feylka daabacaada, gaar ahaan daabacaadda yar, ay ku taal kaliya saxanka madow, waana inuusan ka soo muuqan taarikada kale ee saddexda midab leh. Haddii ay muuqato, tayada wax soo saarka la daabacay si weyn ayaa loo dhimi doonaa. Marka sawirada RGB loo rogo sawirada CMYK, qoraalka madoow wuxuu hubaal noqon doonaa afar midab madow. Haddii aan si kale loo qeexin, waa in wax laga qabtaa.
6. Asalka madow ma sahlana in la maareeyo. Si loo gaaro saameynta, asalka madow waxaa lagu daabacan karaa khad madow gaar ah ama laba jeer ayaa la daabici karaa. Ma dhib badna in la daabaco, waana ka xoog badan tahay shaqada.
7. Isugeynta dhawr dhibcood oo midab leh, gaar ahaan in ka badan 70% dhibco. Gaar ahaan, bunni madow, kafee, cagaar madow (shaashad fidsan, oo ay ku jiraan buluug 70), buluug mugdi ah, buluug buluug ah, iwm. Way adag tahay in la daabaco sababo la xiriira farqiga u dhexeeya midabka mana sahlana in dheelitir lagu helo mashiinka daabacaadda .
8. Daabacaadda, waxyaabaha guud ahaan kaamil-buuxa ah, midab-buuxa leh oo bogga buuxa ama aag ballaadhan leh, jilayaal cadcad oo la beddelay, isla astaan, iyo isku midab isku mid ah, guud ahaan way adag tahay in la raaco midabka, si fududna loo soo saaro farqiga midabka, ciribtirka cirridka, murugada, xoqida Dhacdada Dhaawaca.
9. Qoraal yar oo dahab iyo qalin ah. Xirfadlayaashu waxay yiraahdaan qoraalka yar wuxuu ka baqayaa qalajinta geedi socodka dufcadda. Kuwani waa in lagu xakameeyaa meesha, saxanka daabacaadda waa in la tirtiraa nadiif, uumiga khadku waa in la xakameeyo illaa 14, feejignaana waa in la siiyaa saxanka qalalan.
Marka la soo koobo, arrimaha daabacan ee aqoonta leh waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda: 1. Daabacaadda saxda ah; 2. Midab midab lebis ah; 3. Dhibco buuxa; 4. Dheelitirka khadku; 5. Ma jiraan cilladaha daabacaadda, sida xoqidda, xoqitaanka, qaabeynta, iyo daabacaadda dhejiska; 6., Aad u daacad u ah qoraalkii asalka ahaa. Waa inaan raacno alaab daabacan oo tayo sare leh si aan ula qabsano fikradaha bilic soo celinta dadka.